सही तरीकाले कपाल हटाउने उपकरण किन्नको लागि - टेक्निकल जानकारी - शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण कम्पनी लिमिटेड कम्पनी
सही तरीकाले कपाल हटाउने उपकरण किन्नको लागि
समय: 2021-03-26 हिट्स: 4
विषयवस्तु सुरू गर्नु अघि, पहिले कपाल हटाउने उपकरणहरूको प्रकारहरूको बारेमा कुरा गरौं।
बजारमा सब भन्दा लोकप्रिय उपकरणहरू निम्न दुई प्रकारका कपाल हटाउने यन्त्रहरू हुन्:
१. लेजर कपाल हटाउने उपकरण
२. गृह आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण
कपाल हटाउने उपकरण घर आईपीएल (ईन्टेन्स पल्स्ड लाइट) प्रकार र लेजर प्रकारमा विभाजित छ। दुबै कपाल हटाउने सिद्धान्त उस्तै हो। "सेलेक्टिभ फोटोपायरोलिसिस प्रभाव" भनेको "हल्का उर्जा लिनका लागि कपालको फोलिकल मेलेनिन प्रयोग गरेर र कपालको कपाल तताउने गरी कपाल हटाउने उद्देश्य प्राप्त गर्न कपालको फोलिकुल नष्ट गर्दछ।" वर्तमानमा, बजारमा सबै भन्दा कपाल हटाउने उपकरणहरू आईपीएल हो। लेजर कपाल हटाउने उपकरणहरू सामान्यतया ब्यूटी सैलुन र अस्पतालहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
कपाल हटाउने उपकरण खरीद मार्गनिर्देश विवरण:
घरको कपाल हटाउने उपकरणको तरंगदैर्ध्य 510१० एनएम भन्दा बढि हुनुपर्दछ, अन्यथा कपाल हटाउने प्रभाव पक्कै राम्रो छैन यदि यो यो मान भन्दा कम छ भने।
कपाल हटाउने उपकरणको फ्ल्यासको संख्याले यसको सेवा जीवनलाई जनाउँछ। उच्च-गुणस्तरको कपाल हटाउने उपकरणहरूमा सामान्यतया 200,000 भन्दा बढी फ्ल्यास हुन्छ। अधिक चमक, सेवा जीवन लामो छ। एक सय हजार फ्ल्यासहरू साधारण व्यक्तिको लागि १० बर्ष भन्दा बढी प्रयोग भएको छ। यदि कपाल हटाउने उपकरण 300,000००,००० भन्दा बढी पटक हुन सक्छ, यो अनुमान गरिएको छ कि यो युवाबाट वृद्धसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पूरै शरीरको कपाल हटाउन सजिलो छ यदि प्रकाश क्षेत्र ठूलो छ भने। लेजर कपाल हटाउने उपकरणको प्रकाश क्षेत्र सामान्यतया सानो हुन्छ, तर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरणको प्रकाश क्षेत्र अलि ठूलो छ।
कपाल हटाउने उपकरणको प्रभावकारिता मापन गर्न एक महत्वपूर्ण सूचकको रूपमा, कपाल हटाउने उपकरणको लागि ऊर्जा घनत्व पनि एक महत्त्वपूर्ण चयन मापदण्ड हो। जति धेरै ऊर्जा घनत्व, कपाल हटाउने प्रभाव राम्रो छ।
यी माथि कपाल हटाउने उपकरण को गुणवत्ता को न्याय गर्न आधारभूत पोइन्टहरु छन्। यी मानदण्डहरूको तुलना गर्नका लागि निश्चित गर्नुहोस् कि कपाल हटाउने उपकरणहरूको विस्तृत श्रृंखला छनौट गर्दा तपाईं असहाय महसुस गर्नुहुन्न।
अघिल्लो: कसरी लागत-प्रभावी घर कपाल हटाउने उपकरण छनौट गर्न
अर्को: कसरी र कति पटक कपाल रिमोअल उपकरण प्रयोग गर्ने?